सडकमा पोख्ने दूध, बारीमा कुहिने तरकारी वा जिउँदै पुरिने कुखुरा नै राहतमा बाडेँ के हुन्छ ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सडकमा पोख्ने दूध, बारीमा कुहिने तरकारी वा जिउँदै पुरिने कुखुरा नै राहतमा बाडेँ के हुन्छ ?
किसानका उत्पादनहरु राहतमा बाडे कसो होला सरकार ? अहिले कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको संत्रास सिंगो विश्वमा भोगी रहेको छ । ठूला विकसित राष्ट्रलाई छाडौं । अथवा अहिलेलाई सारा विश्वलाई विर्सौं । कुरा गरौं आफ्नै राष्ट्रको । हामी अरु सारा दुनियालाइ हेर्नाले आफुले गर्नु पर्ने वा गर्न सक्ने कामहरु पनि गर्न सकिरहेका छैनौं ।
अहिलेलाई गाली गर्न तिर मात्रै पनि नलागौं । तीनै तहका सरकारलाई ‘सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाचिने’ केही सुझावहरु दिन चाहन्छु । मेरो कृषिसम्वन्धी अनलाइन ‘हलोखबर’को फेसबुक तथा समाचार कमेन्टमा थुप्रै किसानहरुले आफ्ना पीडाहरु पोखिरहेका छन् ।
त्यसमध्ये कैलालीबाट पहलमान देउवाले भनेका छन्, ‘सर, मैले १८ हजार जति लेयर्स कुखुरा पालेको छु । तर तिनीहरु भोकभोकै मर्न लागे । मैले त १५ हजार जति कुखुरा पुर्न लागेको छु, तपाइ के सल्लाहा दिनुहुन्छ ?’ मसंग जवाफका लागि कुनै शब्द नै थिएनन् । ‘सरी यार’ भन्न वाहेक मसंग अरु विकल्प पनि थिएन् ।
के अव यस्तै अवस्था टुलुटुलु हेरिरहने त ? विकल्पहरु थुप्रै छन् । विशेषगरी स्थानिय पालिकाहरुले चाहेमा किसानका यस्ता समस्याहरु तुरुन्त समाधान गर्न सक्छन् ।
लकडाउनको अवस्था अझै कति लम्बिनेछ भन्ने यकीन गर्न अझै कठिन छ । यो अवस्था अझै महिना दिन कट्यो भने यो देशमा कोरोना होइन्, भोकमारीबाट मान्छे मर्नेछन् । चीन र भारतले पक्कै पनि खाद्यन्नमा रोक लगाउने छ । अमेरिकाले क्यानाडा लगायतका मुलुकमा माक्स निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगायो । अन्य कतिपय देशले पनि यसै गर्दैछ । लकडाउनको अवस्था लम्बियो भने खाद्यन्न संचयती गर्न पनि विभिन्न देशहरुले खाद्यन्न निर्यातमा पनि रोक लगाउनेछ ।